OTU ESI EME EGO NA TWITTER - TWITTER - 2019
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ndị ọrụ mgbasa ozi ọ bụla na-ewu ewu ugbu a nwere ohere ịtụle akaụntụ gị, na Twitter abụghị ụdị. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, profaịlụ gị na ọrụ microblogging nwere ike ịba uru ego.
Otu esi eme ka ego na Twitter na ihe iji mee maka nke a, ị ga-amụta site n'ihe a.
Hụkwa: Otu esi emepụta akaụntụ Twitter
Ụzọ iji monetize akaụntụ Twitter gị
Nke mbụ, anyị na-achọpụta na ọ ga-abụrịrị na a ga-eji ego Twitter nweta ego. Otú ọ dị, site na nzukọ nwere ezi uche na nchịkọta ọnụahịa zuru oke, ọrụ netwọk a nwere ike iweta ezi ego.
Dị ka ọ dị, ịchọrọ ịchọta na Twitter, inwe akaụntụ "zero", dịkarịa ala nzuzu. Iji tinye aka na monetization nke profaịlụ, ị ghaghị inwe ọ dịkarịa ala 2-3 puku ụmụazụ. Otú ọ dị, nzọụkwụ mbụ na ntụziaka a nwere ike ime, ebe ị rurula akara akara nke ndị debanyere aha.
Usoro 1: Mgbasa ozi
N'aka nke aka, nhọrọ a iji cheta Twitter dị mfe ma kwụ ọtọ. Na ndepụta anyị, anyị na-ebipụta mgbasa ozi nke profaịlụ ndị ọzọ na netwọk mmekọrịta, ọrụ, saịtị, ngwaahịa, ma ọ bụ ụlọ ọrụ niile. Maka nke a, n'otu oge, anyị na-enweta ụgwọ ego.
Otú ọ dị, iji nweta n'ụzọ dị otú a, anyị ga-enwerịrị akaụntụ na-akwalite ha na-akwado ya nke ukwuu. Nke ahụ bụ, iji dọta ndị na-akpọsa ngwá ahịa dị oké njọ, ị ga-echekwa teepu ahaziri gị na ndị na-ege ntị.
Dịka ọmụmaatụ, ihe ka ukwuu n'ime akwụkwọ gị metụtara ụgbọala, teknụzụ nke oge a, ihe omume egwuregwu, ma ọ bụ isiokwu ndị ọzọ na-amasị ndị ọrụ. Ya mere, ma ọ bụrụ na ị makwaara nke ọma, mgbe ahụ, i nwere ike iru ndị na-ege ntị, nke a na-adọrọ mmasị ndị mgbasa ozi.
Ya mere, ọ bụrụ na akaụntụ Twitter gị na-agbaso ihe ndị a dị n'elu, ọ bara uru na-eche echiche banyere ịmepụta ego site na mgbasa ozi.
Ya mere, olee otu ị si amalite ịrụ ọrụ na ndị mgbasa ozi na Twitter? Maka nke a, e nwere ọtụtụ ihe pụrụ iche. Mbụ ị kwesịrị ịmara onwe gị na ọrụ ndị dị ka QComment na Twite.
Ebe ndị a bụ nsụgharị dị iche iche nke ọrụ na ọ gaghị esiri ike ịghọta ụkpụrụ nke ọrụ ha. Ndị ahịa nwere ike ịzụta tweet na retweet sitere na ndị na-ede blọgụ (ya bụ, site na anyị), ma kwụọ ụgwọ maka na-esote. Otú ọ dị, o yighị ka ọ ga-eme ezigbo ego site na iji ọrụ ndị a.
Enwere ike inweta ego ha nwere ike iji nweta mgbasa ozi ndị ọzọ. Ndị a bụ mgbasa ozi mgbasa ozi a ma ama: Blogun, Plibber na RotaPost. N'okwu a, ka ị na-agụkwu ndị na-agụ akwụkwọ, ị ga-enwetakwu onyinye ndị ị na-enweta na nkwụnye ụgwọ.
Isi ihe ichetara mgbe ị na-eji usoro ego ego ahụ bụ na ọ dịghị onye ga-agụ teepu naanị akwụkwọ mgbasa ozi. Ya mere, mgbe ị na-ezipụ tweets azụmahịa na akaụntụ gị, ịkwesịrị ịgbalịsi ike maka uru zuru oke.
Site n'iji amamihe na-ekesa ọdịnaya mgbasa ozi na teepu, nanị ị na-eme ka ụba gị nweta ogologo oge.
Hụkwa: Otu esi akwalite akaụntụ gị na Twitter
Usoro 2: Mmemme Mgbakwunye
Enwere ike ịchọta ụgwọ ọrụ na "ntinye aka" na akaụntụ ego Twitter. Otú ọ dị, ụkpụrụ dị na nke a dịtụ iche. N'adịghị ka mbipute mbụ nke akwụkwọ azụmahịa, mgbe ị na-eji mmemme nkwalite, a na-akwụ ụgwọ ọ bụghị na ịkọ ozi, kama maka omume ụfọdụ ndị na-agụ.
Dabere na ọnọdụ nke "mmekọ", omume dị otú ahụ bụ:
Soro njikọ na tweet.
Ndebanye aha nke ndị ọrụ na ụlọ ọrụ akwadoro.
Ịzụta nke ndị debanyere aha ha dọtara.
Ya mere, ego site na mmemme mmekọ nwere kpam kpam na omume nke ụmụazụ anyị. Ya mere, isiokwu gbasara ọrụ ndị a kwalitere, ngwaahịa na ihe onwunwe kwesịrị ịdị ka ihe kwekọrọ na ntụziaka nke microblog nke anyị.
Ọzọkwa, ndị na-agụ akwụkwọ adịghị mkpa ịmara na anyị na - akpọsa njikọ njikọ mmekọ. Akwalite mkpa ọdịnaya dị iche iche ga-agbakwunye na tweets anyị na-eri nri ka ndị ọrụ wee kpebie ịgụ ya na nkowa.
Dị ka o kwesịrị ịdị, iji nweta tangible dividends si Mgbakwunye mmemme, kwa ụbọchị na-ege ntị nke anyị Twitter akaụntụ, i.e. okporo ụzọ kwesịrị ịdị ezigbo mkpa.
Ọfọn, ebe ị ga-achọ maka otu "mmekọ" a? Nhọrọ kachasị mfe ma dị mfe bụ ịrụ ọrụ na ụlọ ahịa ụlọ ahịa ndị mmekọ. Dịka ọmụmaatụ, site n'oge ruo n'oge ịnwere ike ịde tweet banyere ngwaahịa ndị dabara adaba na foto nke ihe ngosi gị. N'otu oge ahụ na ozi ndị dị otú ahụ ị ezipụta njikọ na peeji nke ngwaahịa dị mkpa na ụlọ ahịa na-akwado ụlọ ahịa.
N'ezie, ị ga - enwe ike ịkwalite mmekọrịta gị na ndị mmadụ n'otu n'otu. Nhọrọ a ga-arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ ndị na-agụ microblog gị dị ọtụtụ puku.
Ọfọn, ọ bụrụ na akaụntụ Twitter gị enweghị ike ịnya isi isi nke ndị na-eso ụzọ, ụzọ kachasị mma bụ otu ntụgharị. Dịka ọmụmaatụ, na Tvayt.ru ọ ga-ekwe omume na-arụ ọrụ na Mgbakwunye njikọ ọbụna na opekempe ọnụ ọgụgụ nke ndị debanyere aha.
Usoro 3: Akaụntụ Akaụntụ
Na mgbakwunye na mgbasa ozi ngwaahịa na ọrụ ndị ọzọ, ị nwere ike ịkwalite ahịa azụmahịa gị na Twitter. Ị nwere ike gbanwee akaụntụ Twitter gị na ụdị ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, ma ọ bụ jiri listi ọrụ ahaziri iche iji dọta ndị ahịa.
Dịka ọmụmaatụ, ị na-ere ngwaahịa na nzụlite ahịa ọ bụla ma chọọ ịchọta ọbụna ndị ahịa karịa Twitter.
Ya mere, ị mepụtara profaịlụ ma jupụta ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ọkacha mma na-egosi ihe ị na-enye ndị ahịa.
N'ọdịnihu, na-ebipụta tweets nke ụdị: aha na nkọwa nkenke nke ngwaahịa ahụ, onyinyo ya, yana njikọ ya. Ọ na-achọsi ike iji belata "njikọ" site n'enyemaka nke ọrụ pụrụ iche dị ka Bitly ma ọ bụ Google URL Shortener.
Hụkwa: Otu esi eme ka njikọta na Google kwụsị
Nzọụkwụ 4: nyochaa nkụnye eji isi mee profaịlụ
E nwere ụzọ dị mkpa iji mee ego na Twitter. Ọ bụrụ na akaụntụ gị dị ezigbo mma, ịkwesighi ịkwado onyinye ahịa na tweets. Maka nzube ndị a, ịnwere ike iji "ohere mgbasa ozi" kachasị anya nke ọrụ microblogging - "nkụnye eji isi mee" nke profaịlụ.
Mgbasa ozi na "nkụnye eji isi mee" na-abụkarị ihe na-adọrọ mmasị ndị na-akpọsa ngwá ahịa, n'ihi na tweet nwere ike ịsagharị n'amaghị ama ma ghara ịhụ na ọdịnaya nke isi ihe dị na peeji nke ahụ dị nnọọ njọ.
Tụkwasị na nke ahụ, mgbasa ozi dị otú ahụ dị oké ọnụ karịa ikwu okwu na ozi. Ọzọkwa, ụzọ ezi uche dị na monetizing "caps" nwere ike inye ezigbo ego.
Usoro 5: ere ihe ndekọ
Ụzọ kachasị na-ewe oge ma ọ bụ na-ejighị n'aka maka monetizing Twitter - nkwado na ịzụ ahịa na akaụntụ ndị ọzọ na ọrụ.
Usoro nke omume ebe a bụ:
Maka akaụntụ ọ bụla anyị ga-enweta adreesị ozi-e ọhụrụ.
Anyị debanyere akaụntụ a aha.
Anyị na-eme nkwalite ya.
Anyị na-achọta onye zụrụ na saịtị ma ọ bụ na Twitter ma na-ere "nyocha".
Ya mere n'oge obula. O yighị ka ụzọ a ga-esi na-akwụ ego na Twitter nwere ike ịmasị mma, ma, n'ezie, uru. Ọnwụ oge na mgbalị na nke a bụ mgbe niile na-emegide na ọkwa nke ụgwọ natara.
Ya mere, ị maara ụzọ ndị bụ isi nke monetizing akaụntụ Twitter gị. Ọ bụrụ na ị kpebisiri ike ịmalite ịme ego site na iji ọrụ microblogging, ọ dịghị ihe mere ị ga-eji kwere na ihe ịga nke ọma nke ọrụ a.